पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह छोरीसंग टिकटकमा रमाउँदै (भिडियो हेर्नुहोस)
June 8, 2020 1118
ऐतिहासिक नेपालमा राजतन्त्रको पछिल्ला शासक अत्यन्तै विवादमा परे । राजत’न्त्रको अन्त्य भएको घोषणा’पछिपनि उनीहरुका हर्क’तका विवाद सँधै समाचार बनिरहे ।
राजतन्त्र अन्त्य हुनासाथ त्यही शासक’का पूर्वयुवराज पारस शाह र पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह’को सम्बन्ध पनि करिब– करिब अन्त्य नै भएको अनुमा’न लगाइएको थियो । कारण, पारसको अतिरिक्त अफेयर र विदेश पलायन । साथै पारसको चालचलन र आँचरणका कार’णपनि उनीबाट हिमानी टाढा नै रहिन् ।
पारसको कुलत र बिग्रि’एको चरित्र कहिलै सुधार्न नसके’पछि हामी एक्लै रमाउँन थालिन् । युवती र अन्य बिभिन्न सम्बन्धका कारणपनि हिमानी टाढा हुन बाध्य भएको पारि’वारीक स्रोतको भनाई छ । पारिवारिक रूपमा उक्त विषयमा पूर्वराजा ज्ञा’नेन्द्र शाहले जानका’री पाए’पछि पारसका लागि निर्मल’निवासको ढोका बन्द भयो, जुन अहिले’सम्म खुलेको छैन ।
पारसले उनलाई सँधैका लागि त मेरो छोराको रुपमा रहँन सक्दैनस् भनेर बचन लगाएपछि उनी अहिलेसम्म निर्मल निवास नटेको स्रोतको दावी छ ।
यसै क्रममा लकडा’उनमा समय कटाउन मानिसहरुले अने उपाय अपनाई रहेका छन् ।त्यसमा पनि आधिकांश मानिस’हरुको पहिलो रोजाइमा पर्छ टिकटक ।
टिकटक एक चीनीयाँ एप हो जसमा जो कोहीको आवा’जमा पनि हाउभाउ मिलाएर आफ्नो भिडि’यो बनाउन सकिन्छ । पूर्वअधिराजकुमारी हिमानी शाह र उनकी छोरी पूर्णिका शाह पनि लकडाउ’नको फुर्सदिलो समयमा टिकटकमा रमाएको देखिन्छ ।
जस्तो सुकै असहज परिस्थि’तीमा पनि हँसिलो मुहारकासाथ देखापर्ने हिमानी भिडियोमा पनि छोरी पुर्णि’काको साथमा खुसी देखिन्छिन् । यहाँ थिचेर भिडियो हेर्नुहोस् ।।
Prevभोलि जेठ २७ गते मंगलबारको राशिफल हेर्नुहोस्
Nextअझै बढ्यो सुनको मूल्य, यस्तो छ आजको सुनको भाउ
एउटा त्यस्तो अचम्मको गाउँ जहाँ छोरा नै जन्मिदैनन् !
युवतीको दुव्र्यव’हारमा परेका नेपाली चालक खड्का विश्वभर भाइरल, सहयोगमा उठ्यो ५० हजार डलर
ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य कतिमा कारोबार हुँदैछ ? हेर्नुहोस्